Tech Story - Fampidinana teknolojia sy rindrambaiko
Diska sy fizarazarana
Andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika
elektrika sy elektronika
Channel Video Nourishment
Ampidino ny Steel sy nofo 2.2 b75 - Android
Admin Enga anie 17, 2022 No Comments
Ny lalao Steel And Flesh dia mitondra anao mitambatra hetsika sy lalao paikady 3D ary azonao atao ny manangana ny fanjakanao lehibe amin'ny tontolo medieval. Misy mihoatra ny…
Ampidino ny mpangalatra karatra 1.3.1 – lalao karatra Android
Ao amin'ny Card Thief, mety ho reraka amin'ny lalao piozila ianao amin'ny voalohany, saingy tsy tokony ho kivy ianao ary afaka mitsambikina amin'ny lalao ary mahazo tombony ...
Ampidino ny lalao lehibe Archery 1.3.4 – Android
Amin'ny alàlan'ny fampidinana Archery Big Match dia afaka miditra amin'ny fifaninanana mampientam-po sy mampiankin-doha ianao ary mahatsapa ny fitifirana tena izy. Ny fanaraha-maso tsotra amin'ny lalao dia ahafahanao mankafy azy ary…
Ampidino ny Lionheart Dark Moon v2.1.1 – Android
Lionheart Dark Moon dia navoakan'ny Emerald City Games maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store. Ity lalao ity dia amin'ny fomba mihetsika. Ao amin'ny Lionheart Dark Moon, arovy ny fanjakanao amin'ny…
Ampidino ny Knives Out v1.223.427388 – Android
Navoakan'ny NetEase Games maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store ny Knives Out. Ity lalao ity dia amin'ny fomba fitsangatsanganana, izay afaka nisoratra anarana isa…
Ampidino ny Color Road v3.17 – Android
Ny lalao Color Road dia navoakan'ny studio VOODOO lalao fampandrosoana maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store. Ity lalao ity dia amin'ny fomba arcade, izay afaka nisoratra anarana…
Ampidino ny mpiady tampoka v7.1.5 – Android
Navoakan'i Honeydew Games maimaim-poana ao amin'ny Google Play Store ny Sudden Warrior. Ity lalao ity dia amin'ny fomba filalaovana, izay afaka nanoratra isa 4.5…
Ampidino ny Snake VS Block v1.34 - Android
Snake VS Block dia navoakan'ny studio lalao VOODOO maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store. Ity lalao ity dia amin'ny fomba arcade, izay afaka misoratra anarana…
ZeroToMastery - Mianara misaintsaina [Famokatra sy fifantohana] 2022
Famaritana Ny fianarana misaintsaina dia fampianarana momba ny fisaintsainana sy ny teknika hampitomboana ny vokatra sy fifantohana ho an'ny programmer, navoakan'ny akademia manokana an'ny Zero to Master. manao…
ZeroToMastery - Python ho an'ny Business Data Analytics & Intelligence 2022
Description Python ho an'ny Business Data Analytics & Intelligence dia taranja famakafakana angon-drakitra momba ny fandraharahana sy fandraharahana navoakan'ny Zero To Master Academy. Amin'izao tontolo maoderina izao, ny angon-drakitra momba ny orinasa…
Famaritana DevOps Bootcamp: Terraform dia taranja fanofanana Terraform ho an'ny manampahaizana DevOps, injeniera fotodrafitrasa rahona ary cis-admin, navoakan'ny Zero To Master Academy. Amin'ity taranja ity dia hanomboka…
Udemy - The Data Analyst Course: Complete Data Analyst Bootcamp 2022
Famaritana The Data Analyst Course: Complete Data Analyst Bootcamp 2022 dia fianarana fandalinana angon-drakitra miaraka amin'ny Python, NumPy, fanofanana Pandas, fanangonana angon-drakitra, preprocessing, karazana data ary sary an-tsary. …
1 2 3 4 ... 1,349 Manaraka
REHETRA REHETRA VIDEO DOWNLOADER
mpamoaka horonantsary audio
Ny lamaody sy ny hatsaran-tarehy
Lahatsoratra ambony sy pejy
Tantara Tech Copyright © 2022.